Etazonia: Manoratra Blaogy Avy Any Amponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2018 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Italiano, 简体中文, 繁體中文, srpski, বাংলা, 日本語, Español, English
Ny famakiana boky maro, ny filalaovana karatra na ny fakàna maripahaizana vaovao, ireo no torolalàna mba hiatrehana ny famonjana [amin'ny fiteny anglisy, toy ireo blaogy notanisaina rehetra] natolotr'ilay voafonja fahiny, Sam Stanfield, eo amin'ny blaogy Ezine @rticles.
Fa ho an'ny olon-dehibe 1 amin'ny 1 000 ao anatin'ireo fonja manerana an'i Etazonia, fandaniana andro iray amin'izao fotoana izao angamba ny fanaovana blaogy – fara-faharatsiny avy amin'ny alalan'ny olona iray hafa any ivelan'ny fonja, izay manana fahafahana miditra amin'ny solosaina.
Lasa miha-mihanaka ny fanaovana blaogy avy any am-ponja.
Shaun Atwood, gadra taloha, mamoaka blaogy amin'izao fotoana izao mitondra ny lohateny hoe Jon’s Jail Journal, izay amerenany mamoaka ny taratasin'ireo amerikana gadra.
Tamin'ny faramparan'ny taona lasa, naharay taratasy iray an'i Renee izy, voaheloka hifonja mandra-pahafaty, izay voaheloka hifonja 60 taona ao amin'ny fonjan'i Arizona, fony izy mbola adolantsento tamin'izay. Manoratra i Renee fa miasa sy mianatra izy, ary manoritsoritra an'ireo trangan-javatra hafa any am-ponja ihany koa.
“Nanontany ny hevitro mikasika ny sakafo ianao. Oh mampihomehy ahy izany. Tsy te-hisakafo ao an-dakozia aho. Hitako ny nisintonan-dry zareo kadradraka iray avy tao am-bilany ary mbola narosony ihany avy eo. Hitako ireo lovia be teny an-tokontany notsabahan'ireo voromailala. Ny akoho manta mipetrapetraka eny rehetra eny, tsy misarona akory. Tena maharikoriko ahy io.”
Ao Arizona ihany koa, no ahitana an'i Shannon Parc, mpanoratra sady mpikatroka ho an'ny zon'olombelona. Manoratra eo amin'ny blaoginy Persevering Prison Pages i Shannon Parc fa tsy ampy mpiasa ny fonja misy azy.
“Mifanohitra amin'izay heverin'ireo mpanao lalàna sy ireo mpandoa hetra ao Arizona, tsy ampy ireo mpiasa miasa tontolo andro ato amin'ny ADOC. Ampy hanesorana ireo mpiambina ho alaina hankany amin'ireo sampana hafa mba hitazonana ny isa ambany indrindra amin'ireo mpiambina sy mba hampandehanana ny sampana. Ary eo am-panenàna ny isan'ireo mpiambina 614 ireo mpanao lalàna amin'izao fotoana izao. Mety hitera-doza ny fampihenana mpiasa nefa sady tototra olona be loatra. Indrindra indrindra ao anatina toerana iray feno zava-mahadomelina, fahasorenana, hanohanana, fankahalàna ary ireo mpidoroka izay tsy manana zavatra ahiana.”
Manohy i Shannon Parc amin'ny alalan'ny fanoritsoritana ny asan'ireo voafonja maro hafa, anisan'izany ny fampiasana ny rongony sy ireo zava-mahadomelina hafa. Milaza izy fa tsy ampy ny fanarahamaso, noho ny isa voafetran'ireo mpiambina.
Eo amin'ny blaogy Friends of Prisoners, (Sakaizan'ireo mpifonja), lahatsoratra iray vao haingana no mangataka an'ireo mpamaky mba hanomboka fifandraisana miaraka amin'ireo gadra efatra izay ampijalian'ny aretin-tsaina. Anisan'ireo i James Schmeisser avy any Wisconsin, izay manoratra fa natoka-monina izy.
“Miarahaba an'ireo izay mba miraharaha, izay manam-pitiavana ary izay mahatsapa. Marary aho ankehitriny noho ny zavatra mahazo ahy amin'izao fotoana izao. Mihidy 24 ora amin'ny 24 aho, in-telo isaky ny herinandro ary mandritra ny 23 ora in-4 isaky ny herinandro. Tsy manana fianakaviana manohana aho, na fanohanana ara-tsaina, na namana sy ny sisa. Sahala amin'ny ankamaroan'ireo olon-drehetra, nanao hadisoana aho ary nijaly izahay sy ireo zanako ary tsy fantatro ny tena tokony ho ataoko. Miezaka mamotika tanteraka ny fiainako ny devoly. Anisan'izany ireo finiavako ny mba ho lehilahy mendrika, miankin-drindrina aho, ary tena mijaly ara-tsaina marina, ara-pihetseham-po sy ara-batana.”
Velona ao am-ponja ihany koa miaraka amina vondrona iray antsoina hoe SHAC7 ny fikatrohana, izay nogadraina ireo mpikambana ao aminy noho ny “fanaovana fanentanana mba hanakatonana ny laboratoaram-panandramana an'ireo siansan'ny fiainana an'i Huntingdon.”
Iray amin'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona, Josh Harper, no manana ny blaogy izay mitondra ny anarany. Tao anatin'ny lahatsorany farany, manoratra izy fa manohy miady, ary manohitra ny fanakilasiana ny fonja ho sahala amin'ny tranony.
Hatramin'ny androany, nangalarin'ny Fanjakana ny taona roa farany teo amin'ny fiainako. Ny 16 novambra 2006, niditra tato amin'ny ivon-toerana famonjàna federaly akaiky eto aho, nampitanjahana, nendahina, nosalorana salopety, ary natsipy tao anaty efitrano famonjàna noho ny fandrisihana ireo tetika niteraka resabe mba hanaovana izay hanakatonana ny laboratoara iray momba ny biby.
Nanome lesona ho ahy ireo voafonja nifanena tamiko voalohany . “Andramo ny manadino hoe ato ianao. Aza mieritreritra fotoana. Ataovy izay rehetra azonao atao hanadinoina ny tontolo any ivelany.” Torohevitra mampihoron-koditra re izany! Na dia mety hahatonga ny fiainako ho mafy aza izany, tony aho amin'ny fahitàna fa matanjaka foana aho miatrika ny famonjàna. Tsy tiako mihitsy ny ho sahala amin'ny iray amin'ireo olona tena voafolaka izay mitsahatra moramora sy hijery ireo fefy vy sy ireo tariby, manomboka mihevitra an'io toerana io ho toy ny toerana fonenany. Mankahala mafy ny fonja aho. Izany no milaza amiko fa tena tsy mbola very saina aho.”